Imandarmedia.com.np: मन्त्रिमण्डल विस्तारै गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, हेर्नुहोस् आज को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
Big News, Main News, Political » मन्त्रिमण्डल विस्तारै गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, हेर्नुहोस् आज को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
मन्त्रिमण्डल विस्तारै गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा, हेर्नुहोस् आज को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर मंगलबार मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दै छन् । देउवाले मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका १० जना र माओवादीका ६ जना नयाँ सदस्यहरुलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी आजै पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाउने तयारीमा लागेको नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।
शनिबारदेखि सोमबारसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जानकारी यसअघिनै नेताहरुलाई दिएका थिए ।
पार्टीभित्र मन्त्री पदका आकांक्षी धेरै तर, पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालयको संख्या सिमित भएकाले मन्त्री छान्न कठिनाइ परिरहेको छ । जेठ २४ गते माओवादी लगायतका दलहरुको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।